3D प्रिन्टरहरूको लागि परम गाइड | नि: शुल्क हार्डवेयर
इसहाक | | मा अद्यावधिक गरियो 25/02/2022 13:33 | 3D मुद्रण
एडिटिभ मैन्युफ्याक्चरिङसँग फुर्सदको क्षेत्र र उद्योग र प्रविधि दुवैमा आवेदनका थप क्षेत्रहरू छन्। 3D प्रिन्टरहरू तपाईंले छाप्ने तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न आएका छन् र तिनीहरूले नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्छन्, जुन साना वस्तुहरूदेखि जीवित तन्तु र घरहरू वा मोटरस्पोर्टका लागि वायुगतिकीय भागहरूसम्म हुन सक्छ।
केही वर्ष पहिलेसम्म, थ्रीडी प्रिन्टिङ विज्ञान कथाको सामान थियो। धेरैले साधारण 2D पेपरमा छवि वा पाठको सट्टा वस्तुहरू छाप्न सक्षम हुने सपना देखेका थिए। अहिले प्रविधि यति परिपक्क भइसकेको छ अनगिन्ती प्रविधिहरू, ब्रान्डहरू, मोडेलहरू, आदि यस गाइडमा तपाईले यी विशेष प्रिन्टरहरूको बारेमा धेरै जान्न सक्नुहुन्छ।
1 भोक्सेल भनेको के हो?
2 3D प्रिन्टर के हो
2.0.1 थ्रीडी प्रिन्टिङको इतिहास
2.1 additive निर्माण वा AM के हो
2.2 बायोप्रिन्टिङ के हो
2.3 3D प्रिन्टरहरूले कसरी काम गर्छ
3 थ्रीडी डिजाइन र थ्रीडी प्रिन्टिङ
3.1 3D प्रिन्टर सफ्टवेयर
3.1.2 अल्टिमेकर क्युरा
3.1.7 अटोडस्क अटोक्याड
3.1.8 अटोडेस्क फ्यूजन 360
3.1.11 ठोस कार्य
3.2 3D मुद्रण
4 प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
4.0.1 STL कसरी खोल्ने
4.0.2 3D टेम्प्लेटहरू
4.0.3 वास्तविक मोडेलबाट (3D स्क्यानिङ)
5 3D प्रिन्टरको अनुप्रयोग र प्रयोगहरू
5.1 ईन्जिनियरिङ् प्रोटोटाइप
5.2 वास्तुकला र निर्माण
5.3 गहना र अन्य सामानहरूको डिजाइन र अनुकूलन
5.4 फुर्सद: थ्रीडी प्रिन्टरको साथ बनाइएका चीजहरू
5.5 उत्पादन उद्योग
5.6 औषधिमा थ्रीडी प्रिन्टरहरू: दन्तचिकित्सा, प्रोस्थेटिक्स, बायोप्रिन्टिङ
5.7 छापिएको खाना / खाना
भोक्सेल भनेको के हो?
यदि तपाई अझै परिचित हुनुहुन्न भने भोक्सेल, यो के हो भनेर तपाईंले बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि थ्रीडी प्रिन्टिङमा यो महत्त्वपूर्ण छ। यो अंग्रेजी "भोल्युमेट्रिक पिक्सेल" को संक्षिप्त रूप हो, एक घन एकाइ जसले तीन-आयामी वस्तु बनाउँछ।
त्यहाँ अन्य एकाइहरू पनि छन् जस्तै टेक्सेल (बनावट तत्व वा बनावट पिक्सेल), जुन कम्प्यूटर ग्राफिक्समा सतहमा लागू हुने बनावटको न्यूनतम एकाइ हो, वा टिक्सेल (ट्याक्टाइल पिक्सेल), जुन नियोलोजिज्म हो जसले एक प्रकारलाई जनाउँछ। टच स्क्रिनहरूको लागि ह्याप्टिक टेक्नोलोजीको, विभिन्न बनावटको टच अनुकरण गर्न अनुमति दिँदै।
अर्को शब्दमा, यो हुनेछ पिक्सेलको 2D बराबर। र, तपाईले माथिको छविमा देख्न सक्नुहुने छ, यदि त्यो 3D मोडेललाई क्यूबमा विभाजन गरिएको छ भने, ती मध्ये प्रत्येक एक भोक्सेल हुनेछ। यो के हो भनेर निर्दिष्ट गर्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकि केही उन्नत 3D प्रिन्टरहरूले राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न मुद्रणको समयमा प्रत्येक भोक्सेलको नियन्त्रणलाई अनुमति दिन्छ।
3D प्रिन्टर के हो
थ्रीडी प्रिन्टर कम्प्युटर डिजाइनबाट भोल्युम भएका वस्तुहरू प्रिन्ट गर्न सक्षम मेसिन हो। त्यो हो, परम्परागत प्रिन्टर जस्तै, तर समतल सतहमा र 3D मा छाप्नुको सट्टा, यसले गर्छ तीन आयाम (चौडाइ, लम्बाइ र उचाइ) संग)। यी नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिने डिजाइनहरू थ्रीडी वा सीएडी मोडेलबाट र वास्तविक भौतिक वस्तुबाट पनि आउन सक्छन्। XNUMXD स्क्यान.
र तिनीहरूले सक्छन् सबै प्रकारका चीजहरू छाप्नुहोस्, कफीको कप जत्तिकै सरल वस्तुहरूबाट, धेरै जटिल वस्तुहरू जस्तै जीवित तन्तुहरू, घरहरू, आदि। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, आफ्ना छापिएका चित्रहरू कागजबाट जीवनमा आउन चाहने धेरैको सपना यहाँ छ, र तिनीहरू उद्योगभन्दा बाहिर, घरमा पनि प्रयोग गर्न सस्तो छन्।
थ्रीडी प्रिन्टिङको इतिहास
थ्रीडी प्रिन्टिङको इतिहास धेरै भर्खरको देखिन्छ, तर सत्य यो हो कि यो केहि दशकहरू पछाडि जानुपर्छ। सबै कुरा बाट उत्पन्न हुन्छ 1976 देखि inkjet प्रिन्टर, जसबाट हालको मेशिनहरूमा यस प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण कदमहरू लिने र माइलस्टोनहरू चिन्ह लगाउने, भोल्युमका साथ वस्तुहरू उत्पन्न गर्न सामग्रीहरूसँग मुद्रण मसी प्रतिस्थापन गर्न प्रगति गरिएको छ:
सन् १९८१ मा पहिलो थ्रीडी प्रिन्टिङ उपकरणलाई पेटेन्ट गरिएको थियो। उसले गर्यो डा हिदेओ कोडामानागोया नगरपालिका औद्योगिक अनुसन्धान संस्थान (जापान) को। फोटो-संवेदनशील रेजिन प्रयोग गरेर चिपहरू कसरी बनाइन्छ जस्तै, एडिटिभ निर्माणको लागि उनले आविष्कार गरेका २ फरक विधिहरू प्रयोग गर्ने विचार थियो। तर, चासो र आर्थिक अभावका कारण उनको परियोजना अलपत्र परेको थियो ।
यही दशकमा फ्रान्सेली इन्जिनियरहरू डा Alain Le Méhauté, Olivier de Wittte र Jean-Claude André, UV क्युरिङको साथ फोटोसेन्सिटिभ रेजिन्सको ठोसीकरण गरेर निर्माणको प्रविधिको अनुसन्धान गर्न थाल्यो। CNRS ले आवेदन क्षेत्रको कमीको कारणले परियोजनालाई स्वीकृत गर्दैन। र, यद्यपि तिनीहरूले 1984 मा पेटेन्टको लागि आवेदन दिए, यो अन्ततः त्यागिनेछ।
चार्ल्स हल1984 मा, उहाँले स्टेरियोलिथोग्राफी (SLA) को आविष्कार गर्दै कम्पनी 3D प्रणाली को सह-फेला पार्नुहुनेछ। यो एक प्रक्रिया हो जसद्वारा 3D वस्तु डिजिटल मोडेलबाट छाप्न सकिन्छ।
La पहिलो SLA प्रकार 3D मेसिन यो 1992 मा मार्केटिंग गर्न सुरु भयो, तर यसको मूल्यहरु धेरै उच्च थिए र यो अझै पनि धेरै आधारभूत उपकरण थियो।
1999 मा अर्को ठूलो कोसेढुङ्गा चिन्ह लगाइएको थियो, यस पटक उल्लेख बायोप्रिन्टिङ, प्रयोगशालामा मानव अंग उत्पन्न गर्न सक्षम हुनु, विशेष गरी स्टेम कोशिकाहरूसँग सिंथेटिक कोटिंग प्रयोग गरेर मूत्राशय। यो कोसेढुङ्गाको उत्पत्ति वेक फरेस्ट इन्स्टिच्युट फर रिजेनेरेटिभ मेडिसिनमा भएको छ, जसले प्रत्यारोपणका लागि अंगहरू उत्पादन गर्ने ढोका खोलेको छ।
El थ्रीडी प्रिन्टेड मिर्गौला सन् २००२ मा आउनेछ। यो रगत फिल्टर गर्ने र जनावरमा पिसाब उत्पादन गर्ने क्षमता भएको पूर्ण कार्यात्मक मोडेल थियो। यो विकास पनि सोही संस्थानमा भएको थियो।
Adrian Bowyer ले RepRap फेला पारे 2005 मा बाथ विश्वविद्यालयमा। यो सस्तो 3D प्रिन्टरहरू निर्माण गर्ने खुला स्रोत पहल हो जुन स्व-प्रतिकृति हो, अर्थात्, तिनीहरूले आफ्नै भागहरू छाप्न सक्छन् र उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै प्रयोग गरेर। थ्रीडी फिलामेन्ट.
एक वर्ष पछि, मा 2006, SLS प्रविधि आइपुग्छ र लेजर को लागी ठूलो उत्पादन को संभावना धन्यवाद। यसबाट औद्योगिक उपयोगको ढोका खुल्छ ।
2008 पहिलो प्रिन्टरको वर्ष हुनेछ आत्म-प्रतिकृति क्षमता। यो RepRap को डार्विन थियो। यसै वर्ष, सह-सिर्जना सेवाहरू पनि सुरु भयो, वेबसाइटहरू जहाँ समुदायहरूले उनीहरूको 3D डिजाइनहरू साझा गर्न सक्छन् ताकि अरूले तिनीहरूलाई आफ्नै 3D प्रिन्टरहरूमा छाप्न सकून्।
मा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ थ्रीडी प्रोस्थेटिक्स अनुमति। 2008 पहिलो व्यक्ति प्रिन्ट गरिएको कृत्रिम खुट्टाको कारण हिड्न सक्षम हुने वर्ष हुनेछ।
सन् २००९ साल हो मेकरबोट र किट्स थ्रीडी प्रिन्टरहरूको, ताकि धेरै प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूलाई सस्तोमा किन्न र आफ्नै प्रिन्टर आफैं निर्माण गर्न सकून्। त्यो हो, निर्माताहरू र DIY उन्मुख। त्यही वर्ष, डा. गेबोर फोरगाक्सले रक्तनलीहरू सिर्जना गर्न सक्षम भएर बायोप्रिन्टिङमा अर्को ठूलो कदम चाल्छन्।
El पहिलो मुद्रित विमान 3D मा 2011 मा आइपुग्छ, साउथह्याम्प्टन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरहरु द्वारा बनाईएको। यो एक मानवरहित डिजाइन थियो, तर यो केवल7दिनमा र € 7000 को बजेटमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले अन्य धेरै उत्पादनहरूको उत्पादनमा प्रतिबन्ध खोल्यो। वास्तवमा, यही वर्ष पहिलो मुद्रित कारको प्रोटोटाइप, कोर इकोलोजिक अर्बी, € 12.000 र € 60.000 बीचको मूल्यमा आउनेछ।
एकै समयमा, मुद्रण जस्तै महान सामग्री प्रयोग गर्न थाले स्टर्लिंग चाँदी र 14kt सुन, यसरी गहनाका लागि नयाँ बजार खोल्दै, सटीक सामग्री प्रयोग गरेर सस्तो टुक्राहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुँदै।
2012 मा यो आउनेछ पहिलो कृत्रिम जबडा प्रत्यारोपण बेल्जियम र डच अनुसन्धानकर्ताहरूको समूहलाई थ्रीडी मुद्रित धन्यवाद।
र हाल बजार फेला पार्न रोक्दैन नयाँ अनुप्रयोगहरू, तिनीहरूको प्रदर्शन सुधार, र व्यवसाय र घरहरू द्वारा विस्तार जारी राख्न।
हाल, यदि तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ 3d प्रिन्टरको लागत कति छ, सबैभन्दा सस्तो र सबैभन्दा सानोको मामलामा €100 वा €200 भन्दा बढी, सबैभन्दा उन्नत र ठूलाको मामलामा €1000 वा बढीसम्म, र उद्योग क्षेत्रका लागि हजारौं यूरो खर्च गर्ने केही पनि हुन सक्छ।
additive निर्माण वा AM के हो
थ्रीडी प्रिन्टिङ अरू केही होइन एक additive निर्माण, त्यो हो, एक निर्माण प्रक्रिया जुन, 3D मोडेलहरू सिर्जना गर्न, सामग्रीको तहहरू ओभरल्याप गर्दछ। घटाउ उत्पादनको एकदम विपरीत, जुन प्रारम्भिक ब्लक (पाना, इन्गट, ब्लक, बार,...) मा आधारित हुन्छ जसबाट अन्तिम उत्पादन प्राप्त नभएसम्म सामग्रीलाई क्रमशः हटाइन्छ। उदाहरण को लागी, subtractive निर्माण को रूप मा तपाइँ लेथ मा एक टुक्रा कुँदिएको छ, जुन काठ को ब्लक संग सुरु हुन्छ।
यसका लागि धन्यबाद क्रान्तिकारी विधि तपाईले घरमै वस्तुहरूको सस्तो उत्पादन, इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूका लागि मोडेलहरू, परीक्षणको लागि प्रोटोटाइपहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आदि। थप रूपमा, यो additive निर्माणले पार्ट्सहरू सिर्जना गर्न सम्भव बनाएको छ जुन पहिले नै अन्य विधिहरू जस्तै मोल्ड, एक्सट्रुसन, आदि द्वारा असम्भव थियो।
बायोप्रिन्टिङ के हो
बायोप्रिन्टिङ एउटा विशेष प्रकारको एडिटिभ उत्पादन हो, जसलाई थ्रीडी प्रिन्टरहरू पनि प्रयोग गरिन्छ, तर जसको नतिजा अक्रिय सामग्रीबाट धेरै फरक हुन्छ। सक्छ जीवित तन्तु र अंगहरू बनाउन, मानव छाला देखि एक महत्वपूर्ण अंग सम्म। तिनीहरूले जैविक कम्प्याटिबल सामग्रीहरू पनि निर्माण गर्न सक्छन्, जस्तै कृत्रिम अंग वा प्रत्यारोपणका लागि।
बाट यो हासिल गर्न सकिन्छ दुई विधिहरू:
संरचना, एक प्रकारको सपोर्ट वा मचान कम्पोजिटबाट बनेको हुन्छ biocompatible पोलिमर कि तिनीहरू शरीर द्वारा अस्वीकार गर्दैनन्, र कोषहरूले तिनीहरूलाई स्वीकार गर्नेछन्। यी संरचनाहरूलाई बायोरिएक्टरमा प्रस्तुत गरिन्छ ताकि तिनीहरू कोशिकाहरूद्वारा आबादी हुन सकून् र एक पटक शरीरमा घुसाएपछि, तिनीहरूले बिस्तारै होस्ट जीवका कोशिकाहरूका लागि मार्ग बनाउँछन्।
यो अंग वा तन्तु तह तहको छाप हो, तर प्लास्टिक, वा अन्य जस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुको सट्टा, जीवित सेल संस्कृतिहरू र आकार बनाउन बायोपेपर (बायोडिग्रेडेबल सामग्री) भनिने बन्धन विधि।
3D प्रिन्टरहरूले कसरी काम गर्छ
El कसरी एक 3d प्रिन्टर काम गर्दछ यो लाग्न सक्ने भन्दा धेरै सरल छ:
तपाईं सफ्टवेयरको साथ स्क्र्याचबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ3डी मोडलि। वा CAD डिजाइन तपाईले चाहानु भएको मोडेल उत्पन्न गर्न, वा पहिले नै सिर्जना गरिएको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्, र वास्तविक भौतिक वस्तुबाट 3D मोडेल प्राप्त गर्न 3D स्क्यानर पनि प्रयोग गर्नुहोस्।
अब तपाईंसँग छ 3D मोडेल डिजिटल फाइलमा भण्डारण, त्यो हो, वस्तुको आयाम र आकारहरूसँग डिजिटल जानकारीबाट।
निम्न छ काट्ने, एक प्रक्रिया जसमा 3D मोडेल सयौं वा हजारौं तह वा स्लाइसहरूमा "कट" हुन्छ। त्यो हो, सफ्टवेयर द्वारा मोडेल कसरी टुक्रा गर्ने।
जब प्रयोगकर्ताले प्रिन्ट बटनमा क्लिक गर्दछ, USB केबल वा नेटवर्क मार्फत पीसीमा जडान भएको 3D प्रिन्टर वा SD कार्ड वा पेन ड्राइभमा पास गरिएको फाइल, हुनेछ। प्रिन्टर प्रोसेसर द्वारा व्याख्या.
त्यहाँबाट, प्रिन्टर जान्छ मोटर्स नियन्त्रण टाउको सार्न र यसरी अन्तिम मोडेल प्राप्त नभएसम्म तह तह उत्पन्न गर्नुहोस्। परम्परागत प्रिन्टर जस्तै, तर भोल्युम लेयर लेयर बढ्नेछ।
ती तहहरू उत्पन्न हुने तरिका प्रविधि अनुसार फरक हुन सक्छ जसमा थ्रीडी प्रिन्टरहरू छन्। उदाहरण को लागी, तिनीहरू बाहिर निकाल्न वा राल द्वारा हुन सक्छ।
थ्रीडी डिजाइन र थ्रीडी प्रिन्टिङ
एकचोटि तपाईंले 3D प्रिन्टर के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा पाएपछि, अर्को कुरा हो आवश्यक सफ्टवेयर वा उपकरणहरू थाहा छ मुद्रणको लागि। यदि तपाइँ स्केच वा विचारबाट वास्तविक 3D वस्तुमा जान चाहनुहुन्छ भने केहि आवश्यक छ।
तपाइँलाई थाहा हुनुपर्छ कि त्यहाँ 3D प्रिन्टरहरूको लागि धेरै आधारभूत प्रकारका सफ्टवेयरहरू छन्:
एकातिर कार्यक्रमहरु छन् 3D मोडलिङ वा 3D CAD डिजाइन जसको साथ प्रयोगकर्ताले स्क्र्याचबाट डिजाइनहरू सिर्जना गर्न वा तिनीहरूलाई परिमार्जन गर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ तथाकथित छ स्लाइसर सफ्टवेयर, जसले थ्रीडी मोडेललाई थ्रीडी प्रिन्टरमा छापिने विशेष निर्देशनहरूमा रूपान्तरण गर्छ।
त्यहाँ पनि छ जाल परिमार्जन सफ्टवेयर। यी प्रोग्रामहरू, जस्तै MeshLab, 3D मोडेलहरूको मेसहरू परिमार्जन गर्न प्रयोग गरिन्छ जब तिनीहरूले तिनीहरूलाई मुद्रण गर्दा समस्या उत्पन्न गर्दछ, किनभने अन्य कार्यक्रमहरूले 3D प्रिन्टरहरूले काम गर्ने तरिकालाई ध्यानमा नराख्न सक्छन्।
3D प्रिन्टर सफ्टवेयर
यहाँ केही छन् सबै भन्दा राम्रो 3D मुद्रण सफ्टवेयर, दुवै भुक्तान र नि: शुल्क, को लागी3डी मोडलि। y CAD डिजाइन, साथै नि: शुल्क वा खुला स्रोत सफ्टवेयर:
गुगल र अन्तिम सफ्टवेयर सिर्जना गरियो स्केचअप, यद्यपि यो अन्ततः Trimble कम्पनी को हात मा पास भयो। यो स्वामित्व र नि:शुल्क सफ्टवेयर हो (विभिन्न प्रकारका भुक्तान योजनाहरूसँग) र यसलाई Windows डेस्कटप वा वेबमा (एक उपयुक्त वेब ब्राउजरको साथ कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम) मा प्रयोग गर्ने बीचमा छनौट गर्ने सम्भावनाको साथ।
यस कार्यक्रम ग्राफिक डिजाइन र थ्रीडी मोडलिङ सबै भन्दा राम्रो मध्ये एक हो। यसको साथ तपाईले सबै प्रकारका संरचनाहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि यो विशेष रूपमा वास्तु डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, आदिको लागि डिजाइन गरिएको हो।
अल्टिमेकरले सिर्जना गरेको छ Cura, 3D प्रिन्टरहरूको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको अनुप्रयोग जसको साथमा प्रिन्टिङ प्यारामिटरहरू परिमार्जन गरी G कोडमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।यो डेभिड रानले यस कम्पनीमा काम गरिरहेको बेला सिर्जना गरेका थिए, यद्यपि सजिलो मर्मतसम्भारको लागि उनले LGPLv3 लाइसेन्स अन्तर्गत यसको कोड खोल्ने छन्। यो अब खुला स्रोत हो, तेस्रो पक्ष CAD सफ्टवेयर संग अधिक अनुकूलता सक्षम गर्दै।
आजकल, यो यति लोकप्रिय छ कि यो ए संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको, विभिन्न क्षेत्रहरु बाट 1 मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु संग।
प्रुसा कम्पनीले पनि आफ्नै सफ्टवेयर बनाउन चाहेको छ । यसलाई खुला स्रोत उपकरण भनिन्छ PrusaSlicer। यो एप प्रकार्य र सुविधाहरूको सन्दर्भमा धेरै धनी छ, र एक पर्याप्त सक्रिय विकास छ।
यस कार्यक्रमको साथ तपाईले 3D मोडेलहरू नेटिभ फाइलहरूमा निर्यात गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन अनुकूलन गर्न सकिन्छ मूल Prusa प्रिन्टरहरू.
यो अन्य कार्यक्रम नि: शुल्क छ, र दुवै मा स्थापित गर्न सकिन्छ Microsoft Windows, macOS, र GNU/Linux मा। Ideamaker विशेष रूपमा Raise3D उत्पादनहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो, र यो अर्को स्लाइसर हो जसको साथ तपाईंले आफ्नो प्रोटोटाइपहरूलाई चुस्त तरिकाले प्रिन्ट गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
FreeCAD लाई केहि परिचयहरू चाहिन्छ, यो एक खुला स्रोत परियोजना हो र डिजाइनको लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ थ्रीडी सीएडी। यसको साथ तपाईले कुनै पनि मोडेल सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईले Autodesk AutoCAD मा, सशुल्क संस्करण र स्वामित्व कोड।
यो प्रयोग गर्न सरल छ, र एक सहज इन्टरफेस संग र काम गर्न उपकरण मा धनी छ। त्यसैले यो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने मध्ये एक हो। यो OpenCASCADE मा आधारित छ र GNU GPL लाइसेन्स अन्तर्गत C++ र Python मा लेखिएको छ।
नि: शुल्क सफ्टवेयरको संसारमा अर्को ठूलो परिचित। यो महान सफ्टवेयर धेरै पेशेवरहरु द्वारा पनि प्रयोग गरिन्छ, दिइएको छ शक्ति र परिणाम यो प्रस्ताव गर्दछ। Windows र Linux जस्ता धेरै प्लेटफर्महरूमा र GPL लाइसेन्स अन्तर्गत उपलब्ध छ।
तर यस सफ्टवेयरको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यसले मात्र काम गर्दैन प्रकाश, प्रतिपादन, एनिमेसन र त्रि-आयामी ग्राफिक्स को निर्माण एनिमेटेड भिडियोहरू, भिडियो गेमहरू, चित्रहरू, आदिका लागि, तर तपाईंले यसलाई 3D मोडलिङको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले छाप्न आवश्यक पर्ने कुराहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
यो FreeCAD जस्तै प्लेटफर्म हो, तर यो स्वामित्व र सशुल्क सफ्टवेयर हो। तपाईको इजाजतपत्रमा ए उच्च मूल्य, तर यो एक व्यावसायिक स्तर मा सबै भन्दा प्रयोग कार्यक्रम मध्ये एक हो। यस सफ्टवेयरको साथ तपाईले 2D र 3D CAD डिजाइनहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, गतिशीलता थप्न, सामग्रीहरूमा धेरै बनावटहरू, आदि।
यो माइक्रोसफ्ट विन्डोजको लागि उपलब्ध छ, र यसको एक फाइदा संग अनुकूलता हो DWF फाइलहरू, जुन सबैभन्दा व्यापक र Autodesk कम्पनी द्वारा विकसित मध्ये एक हो।
अटोडेस्क फ्यूजन 360
अटोडेस्क फ्यूजन 360 यसमा AutoCAD सँग धेरै समानताहरू छन्, तर यो क्लाउड प्लेटफर्ममा आधारित छ, त्यसैले तपाईं जहाँ चाहानुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ र सधैं यस सफ्टवेयरको सबैभन्दा उन्नत संस्करण हो। यस अवस्थामा, तपाईंले सदस्यताहरू पनि तिर्नुपर्नेछ, जुन सस्तो पनि छैन।
TinkerCAD अर्को 3D मोडलिङ कार्यक्रम हो अनलाइन प्रयोग गर्न सकिन्छ, वेब ब्राउजरबाट, जसले तपाईंलाई आवश्यक पर्ने ठाउँबाट यसलाई प्रयोग गर्ने सम्भावनाहरू खोल्छ। 2011 देखि यसले प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त गर्दै आएको छ, र 3D प्रिन्टरहरूको प्रयोगकर्ताहरू र शैक्षिक केन्द्रहरूमा पनि धेरै लोकप्रिय प्लेटफर्म भएको छ, किनभने यसको सिकाइ कर्भ Autodesk भन्दा धेरै सजिलो छ।
यो लिनक्स, विन्डोज, र macOS को लागि उपलब्ध छ, र पूर्ण रूपमा नि: शुल्क र खुला स्रोत हो। MeshLab एक 3D जाल प्रशोधन सफ्टवेयर प्रणाली हो। यस सफ्टवेयरको लक्ष्य यी संरचनाहरूलाई सम्पादन, मर्मत, निरीक्षण, रेन्डरिङ, इत्यादिको लागि व्यवस्थापन गर्नु हो।
युरोपेली कम्पनी Dassault Systèmes, यसको सहायक SolidWorks Corp. बाट, 2D र 3D मोडलिङको लागि सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा व्यावसायिक CAD सफ्टवेयरको विकास गरेको छ। SolidWorks Autodesk AutoCAD को विकल्प हुन सक्छ, तर यो हो मेकानिकल प्रणाली मोडेलिङ लागि विशेष डिजाइन। यो नि: शुल्क छैन, न त यो खुला स्रोत हो, र यो Windows को लागी उपलब्ध छ।
अन्ततः, Creo अर्को उत्कृष्ट CAD/CAM/CAE सफ्टवेयर हो 3D प्रिन्टरहरूको लागि तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यो PTC द्वारा सिर्जना गरिएको सफ्टवेयर हो र यसले तपाईंलाई छिटो र थोरै कामको साथ उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूको भीड डिजाइन गर्न अनुमति दिन्छ। उपयोगिता र उत्पादकता सुधार गर्न डिजाइन गरिएको यसको सहज इन्टरफेसको लागि सबै धन्यवाद। तपाईं additive र subtractive निर्माणका लागि भागहरू विकास गर्न सक्नुहुन्छ, साथै सिमुलेशन, उत्पादन डिजाइन, आदिका लागि। यो भुक्तान गरिएको छ, बन्द स्रोत र केवल Windows को लागी।
माथिको सफ्टवेयर प्रयोग गरेर डिजाइन गर्न अर्को चरण वास्तविक मुद्रण हो। त्यो हो, जब मोडेल संग त्यो फाइल देखि थ्रीडी प्रिन्टरले तहहरू उत्पन्न गर्न थाल्छ मोडेल पूरा गर्न र वास्तविक डिजाइन प्राप्त नगरेसम्म।
Este प्रक्रिया धेरै वा कम लाग्न सक्छ, मुद्रण गति, टुक्रा को जटिलता, र यसको आकार मा निर्भर गर्दछ। तर यो केहि मिनेट देखि घण्टा सम्म जान सक्छ। यस प्रक्रियाको बखत, प्रिन्टरलाई ध्यान नदिई छोड्न सकिन्छ, यद्यपि अन्तिम परिणामलाई असर गर्ने समस्याहरूलाई रोक्नको लागि समय-समयमा कामको अनुगमन गर्न सधैं सकारात्मक हुन्छ।
निस्सन्देह, एक पटक 3D प्रिन्टरमा भाग मुद्रण समाप्त भएपछि, काम त्यहाँ समाप्त हुँदैन धेरै अवस्थामा। त्यसपछि अरू प्राय: आउँछन् पोस्ट-प्रोसेसिङ भनेर चिनिने अतिरिक्त चरणहरू जस्तै:
केही भागहरू हटाउनुहोस् जुन उत्पन्न गर्न आवश्यक छ र जुन अन्तिम मोडेलको भाग होइन, जस्तै आधार वा समर्थन जुन भाग खडा हुन आवश्यक छ।
राम्रो अन्तिम फिनिश प्राप्त गर्न सतहलाई बालुवा वा पालिश गर्नुहोस्।
वस्तुको सतह उपचार, जस्तै वार्निसिङ, चित्रकारी, नुहाउने, आदि।
केही टुक्राहरू, धातुका टुक्राहरू जस्तै, बेकिंग जस्ता अन्य प्रक्रियाहरू पनि आवश्यक पर्दछ।
यदि कुनै टुक्रालाई भागहरूमा विभाजन गर्नुपर्‍यो किनभने यसको आयामहरूको कारणले पूरै निर्माण गर्न सम्भव थिएन, यो भागहरू जोड्न आवश्यक हुन सक्छ (विधानसभा, गोंद, वेल्डिंग ...)।
अन्तमा, खण्ड मा FAQs वा बारम्बार सोधिने प्रश्न र उत्तरहरू जुन सामान्यतया 3D प्रिन्टर प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुन्छ। सबैभन्दा सामान्य रूपमा खोजी गरिएका निम्न हुन्:
STL कसरी खोल्ने
सबैभन्दा बारम्बार प्रश्नहरू मध्ये एक हो तपाइँ कसरी .stl फाइल खोल्न वा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सटेन्सनले स्टेरियोलिथोग्राफी फाइलहरूलाई जनाउँछ र यसलाई खोल्न र सम्पादन गर्न सकिन्छ Dassault Systèmes CATIA सफ्टवेयरद्वारा अन्य CAD कार्यक्रमहरू जस्तै AutoCAD आदि।
STLs को अतिरिक्त, त्यहाँ पनि छन् अन्य फाइलहरू जस्तै .obj, .dwg, .dxf, आदि ती सबै धेरै लोकप्रिय छन् र त्यो धेरै फरक कार्यक्रमहरूसँग खोल्न सकिन्छ र ढाँचाहरू बीच रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि तपाईले सधैं थ्रीडी रेखाचित्र आफैं बनाउनु पर्दैन, तपाईले सबै प्रकारका चीजहरूको रेडिमेड मोडेलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो गेमहरू वा चलचित्रहरू, व्यावहारिक घरेलु वस्तुहरू, खेलौना, प्रोस्थेटिक्स, मास्क, फोनहरू सम्म। केसहरू, आदि रास्पबेरी Pi, र धेरै धेरै। त्यहाँ यी पुस्तकालयहरु संग अधिक र अधिक वेबसाइटहरु छन् टेम्प्लेटहरू डाउनलोड र प्रिन्ट गर्न तयार छन् तपाईको थ्रीडी प्रिन्टरमा। केहि सिफारिस गरिएका साइटहरू हुन्:
तपाईं कल्पना गर्नुहोस्
XYZ 3D मुद्रण ग्यालेरी
Dremel पाठ योजनाहरू
वास्तविक मोडेलबाट (3D स्क्यानिङ)
अर्को सम्भावना, यदि तपाई के चाहनुहुन्छ भने पुन: सिर्जना गर्नु हो एक उत्तम क्लोन वा अर्को 3D वस्तुको प्रतिकृति,aप्रयोग गर्नु हो3डी स्क्यानर। तिनीहरू उपकरणहरू हुन् जसले तपाईंलाई वस्तुको आकार ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ, मोडेललाई डिजिटल फाइलमा स्थानान्तरण गर्न र मुद्रण अनुमति दिन्छ।
3D प्रिन्टरको अनुप्रयोग र प्रयोगहरू
अन्तमा, 3D प्रिन्टरहरू छन् धेरै अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा लोकप्रिय प्रयोगहरू जुन दिन सकिन्छ:
व्यावसायिक क्षेत्रमा थ्रीडी प्रिन्टरहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रयोगहरू मध्ये एक द्रुत प्रोटोटाइपको लागि हो, त्यो हो, द्रुत प्रोटोटाइप। या त रेसिङ कारका पार्टपुर्जाहरू प्राप्त गर्न, जस्तै सूत्र १, वा इन्जिनको प्रोटोटाइपहरू वा जटिल संयन्त्रहरू सिर्जना गर्न।
यसरी, इन्जिनियरले उत्पादनको लागि कारखानामा पठाउनु पर्ने भन्दा धेरै छिटो भाग प्राप्त गर्न अनुमति दिइन्छ, साथै प्राप्त गर्न। परीक्षण प्रोटोटाइपहरू हेर्नको लागि अन्तिम मोडेलले अपेक्षित रूपमा काम गर्दछ।
निस्सन्देह, र नजिकको माथि सम्बन्धित, तिनीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ संरचनाहरू निर्माण गर्नुहोस् र मेकानिकल परीक्षणहरू गर्नुहोस् वास्तुविद्हरूका लागि, वा अन्य प्रक्रियाहरूसँग उत्पादन गर्न नसकिने निश्चित टुक्राहरू निर्माण गर्न, नमूनाहरू वा मोडेलहरू आदिको रूपमा भवन वा अन्य वस्तुहरूको प्रोटोटाइपहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
यसबाहेक, को उदय कंक्रीट प्रिन्टरहरू र अन्य सामग्रीहरूले पनि वातावरणसँग छिटो र धेरै कुशलतापूर्वक र सम्मानपूर्वक घरहरू छाप्न सक्षम हुने ढोका खोलेका छन्। यस प्रकारको प्रिन्टरलाई भविष्यका उपनिवेशहरूको लागि अन्य ग्रहहरूमा लैजान प्रस्ताव गरिएको छ।
गहना र अन्य सामानहरूको डिजाइन र अनुकूलन
सबैभन्दा व्यापक कुरा मध्ये एक छ छापिएको गहना। व्यक्तिगत विशेषताहरु संग, अद्वितीय र छिटो टुक्राहरु प्राप्त गर्न को लागी एक तरिका। केही थ्रीडी प्रिन्टरहरूले विभिन्न रंगहरूमा नायलन वा प्लास्टिक जस्ता सामग्रीहरूमा केही आकर्षण र सामानहरू प्रिन्ट गर्न सक्छन्, तर त्यहाँ अन्य व्यावसायिक गहनाहरूको क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिन्छ जुन सुन वा चाँदी जस्ता महान धातुहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यहाँ तपाइँ केहि उत्पादनहरू पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ जुन हालै छापिएको छ, जस्तै कपडा, जुत्ता, फेसन सामान, आदि
फुर्सद: थ्रीडी प्रिन्टरको साथ बनाइएका चीजहरू
नबिर्सौं फुर्सत, जसको लागि धेरै घर 3D प्रिन्टरहरू प्रयोग गरिन्छ। यी प्रयोगहरू धेरै फरक हुन सक्छन्, एक व्यक्तिगत समर्थन सिर्जना गर्नदेखि, सजावट वा स्पेयर पार्ट्सहरू विकास गर्न, तपाईंको मनपर्ने काल्पनिक पात्रहरूको चित्रकला, DIY परियोजनाहरूका लागि केसहरू, व्यक्तिगत मगहरू, आदि। त्यो हो, गैर-लाभकारी प्रयोगहरूको लागि।
धेरै निर्माण उद्योगहरु तिनीहरू पहिले नै आफ्नो उत्पादनहरू उत्पादन गर्न 3D प्रिन्टरहरू प्रयोग गर्छन्। यस प्रकारको एडिटिभ निर्माणको फाइदाहरूको कारणले मात्र होइन, तर कहिलेकाँही, डिजाइनको जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै, यसलाई पारम्परिक विधिहरू जस्तै एक्सट्रुसन, मोल्डहरूको प्रयोग, इत्यादि द्वारा सिर्जना गर्न सम्भव छैन। थप रूपमा, यी प्रिन्टरहरू विकसित भएका छन्, धेरै विविध सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुँदै, मुद्रण धातुका भागहरू सहित।
पार्टपुर्जा बनाउनु पनि सामान्य हो सवारी साधनहरूको लागि, र विमानका लागि पनि, किनकि तिनीहरूले केही भागहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ जुन धेरै हल्का र अधिक कुशल छन्। AirBus, Boeing, Ferrari, McLaren, Mercedes, आदि जस्ता ठूला विमानहरू पहिले नै छन्।
औषधिमा थ्रीडी प्रिन्टरहरू: दन्तचिकित्सा, प्रोस्थेटिक्स, बायोप्रिन्टिङ
थ्रीडी प्रिन्टरहरू प्रयोग गर्ने अर्को ठूलो क्षेत्र हो स्वास्थ्य क्षेत्र। तिनीहरू धेरै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ:
दाँतका प्रोस्थेसिसहरू अझ सटीक रूपमा निर्माण गर्नुहोस्, साथै कोष्ठकहरू, आदि।
भविष्यको प्रत्यारोपणका लागि छाला वा अंग जस्ता तन्तुहरूको बायोप्रिन्टिङ।
हड्डी, मोटर वा मांसपेशी समस्याहरूको लागि अन्य प्रकारका कृत्रिम अंगहरू।
छापिएको खाना / खाना
3D प्रिन्टरहरू प्लेटहरूमा सजावटहरू सिर्जना गर्न, वा निश्चित आकारमा चकलेटहरू जस्तै मिठाईहरू छाप्न र अन्य धेरै फरक खानाहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले, द खाद्य उद्योग यसले यी मेसिनहरूको फाइदाहरू पनि प्रयोग गर्न खोज्छ।
साथै, एक तरिका खाना पोषण सुधार, जस्तै पुन: प्रयोग गरिएको प्रोटिनबाट बनेको मासु फिलेटको मुद्रण वा जसबाट प्राकृतिक मासुमा हुन सक्ने केही हानिकारक उत्पादनहरू हटाइएका छन्। शाकाहारी वा शाकाहारीहरूका लागि उत्पादनहरू सिर्जना गर्ने केही परियोजनाहरू पनि छन् जुन वास्तविक मासु उत्पादनहरू अनुकरण गर्दछ, तर तरकारी प्रोटिनबाट सिर्जना गरिन्छ।
र, निस्सन्देह, थ्रीडी प्रिन्टरहरू एक उपकरण हो जसले शैक्षिक केन्द्रहरूलाई बाढी दिनेछ, किनकि तिनीहरू छन् कक्षाहरूको लागि एक शानदार साथी। तिनीहरूसँग, शिक्षकहरूले मोडेलहरू सिर्जना गर्न सक्छन् ताकि विद्यार्थीहरूले व्यावहारिक र सहज तरिकाले सिक्न सक्छन्, वा विद्यार्थीहरूले आफैंले चतुरताको लागि आफ्नो क्षमता विकास गर्न र सबै प्रकारका चीजहरू सिर्जना गर्न सक्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » 3D प्रिन्टरहरूको लागि अन्तिम गाइड
Schottky डायोड: यो के हो र यसको बारेमा के विशेष छ